Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 3 - Blockchain Izindaba
Ukungayinaki izindlela zokuphepha
Ukutshala imali cryptocurrencies lihlotshaniswa izingozi okusezingeni eliphezulu, kuhlanganise ngenxa khona emakethe inqwaba imikhonyovu abasebenzisa izindlela ezihlukahlukene ukuhlaselwa ukuthola mfihlo-ukonga abatshalizimali. Ngakho, ngokuvumelana ukuqashelwa cryptotrader uPetru McCormack, Ukuhlaselwa Crypto wallets sizibophezele nsuku zonke. Ukuhwebelana nazo kuncike amasheke njalo emandleni.
umnikazi ngalinye cryptocurrency kumelwe baqaphe nobungozi futhi ugcina zonke izinyathelo lapho esebenza cryptocurrencies:
– Khetha indlela yokugcina cryptocurrency: kungcono ukusebenzisa wallets abandayo futhi babe nazo isipele;
– Sebenzisa ezimbili-factor umsebenzisi
– Fakela-anti-virus Uhlelo okuthembekile
– Ungalokothi ukudalula ukhiye wakho wangasese
– Ngaso sonke isikhathi hlola amakheli wallets nezixhumanisi
– Babe nohlelo onokwethenjelwa amaphasiwedi nama-sit-imishwana
Kubalulekile ukugcina amaphasiwedi wakho futhi sid-imishwana endaweni ephephile, kungenjalo kungenzeka ukuphinda isiphetho Mark Frauenfelder, ngubani e 2017 cishe elahlekile bitcoins yakhe isikhathi esingaphezu $ 32,000. Futhi zonke ngoba walahlekelwa ishidi iphasiwedi 24 amazwi kusuka isikhwama abandayo. Ebona ukuthi wayehluleka ngeke bakhumbule PIN-ikhodi isikhwama, yena wethuka kwaphela nasozwaneni ngu ukuqaphela ukuthi hhayi angabenza cryptocurrencies sakhe nganoma iyiphi indlela.
Frauenfelder badlulisela icala bokusebenza we mfihlo isikhwama umenzi, ubhale izinkundla, ukuseshwa izindlela Hack kuye ngisho waphendukela kudokotela onguchwepheshe kokulutheka, kodwa konke lokhu akuzange ukuletha elamukelekile.
Ngenxa yalokho, wasizwa ngumuntu hacker abasha, owabhala umyalelo sendlela crack isofthiwe isikhwama abandayo. Nokho, Kubiza kuye izinyanga eziningi ukucindezeleka, imali kanye nekhomishini kuya hacker okuqeda iphasiwedi kanye sid-ibinzana.
Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 2 Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 4
Esikwaziyo Cryptocurrency Gram and yocingo ICO
Thumela Previous:Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 2
Thumela Landelayo:Ethereum Foundation yamemezela kubamukeli “wave lokuqala izibonelelo” ka $ 2.5 abayizigidi ezingu